Wasiir ku xigeenka shaqada iyo arimaha bulshada oo tababar u soo xirey dhalinyaro – Radio Muqdisho
Munaasabadani oo tababar xirfado shaqo abuuris ah loogu soo xirayaay ilaa 150 dhalinyaro ah oo mudo bilo ah qaadanayay tababar xirfado ay ku shaqeystaan mustaqbalka ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan dowlada Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale,iyadoo bixinta tababarkan ay iska kaashadeen dowladda Japan isla markaana la soo marsiiyay ururka ILO iyo Modern Management.
C/laahi Xuseen Maxamed oo ku hadlayay magaca hay’ada barnaamijkan qabatay ayaa sheegay in tababarkan uu ka koobnaa waxyaabo badan oo ay ka faa’idi karaan dhalinyaradii ka qeybgashay sida farsamada gaadiidka iyo kuwo kale.
Daahir C/laahi Cabdi agaasimaha guud ee wasaarada dhalinyarada iyi sportska ayaa muujiyaay ahmiyada ay leedahay fursadaha shaqo abuurista dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wasiir kuxigeenka shaqada iyo arimaha bulshada Cismaan Libaax Ibraahim oo ka hadlayay munaasabada ayaa dhiiro geliyay tababarada nuucaan ah oo dhalinyarada isla markaana shaqo loogu abuurayo.
Mudooyinkii ugu dambeyeey waxaa jiray dadaalo xirfado shaqo abuuris loogu sameynayo dhalinyarada oo in mudo ah haysatay shaqo la’aan.